Nitsidika Northern Italia By Train | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Nitsidika Northern Italia By Train
(Last Nohavaozina: 11/02/2020)
Italia no iray amin'ny firenena malaza indrindra any Eoropa mba hitsidika noho ny isan-karazany toerana ao amin'ny sisin-tany. Amin'ny faritra avaratr'i Italia dia Premier hidirana rehefa italiana kolontsaina, amin'ny betsaka ny mpandeha mba hahita sy hanao. Na santionany divay tsara sy nisakafo tamin'ny izao tontolo izao-kilasy nahandro na trandrahana fahiny trano fiarovana ary fiangonana, amin'io faritra io tolotra tsy manam-paharoa traikefa fa ho tia. Misy be ny toerana mba hijery in Avaratra Italia, ka raha manana herinandro na roa ny mandany in Italia, ianao tsy maintsy hitady toerana sasany mba hambabo anao. Ireto misy soso-kevitra roa ho an'ny toerana hitsidika rehefa nitsidika Northern Italia lamasinina.
Atombohy ny Touring Northern Italia By Train in Milan
Atombohy ny fitsidihana ny faritra avaratr'i Italia in Milan, ny lamaody renivohitry ny izao tontolo izao. Ny tanàna Feno manaitra Renaissance maritrano, katedraly sy ny tsy mampino izao tontolo izao-kilasy asa tanana. Mpitsidika atao koa ny maka andro nankany amin'ny Zavatra farihy ary Southern Nanketo Alpes eto faritra avy amin'ny tanàn-dehibe mahafinaritra ity. Milan an-trano ihany koa ho any Milan Central, ary heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra Eoropeanina gara. Izany no tonga lafatra toerana manomboka ny fitsidihana ny faritra avaratr'i Italia.
La Spezia ho any Milan Lamasinina
Parma ho any Milan Lamasinina
Train ho any Venice
Ny fiaran-dalamby avy any Milan ho any dia Venise dia matetika roa ora sy sasany, amin'ny be toerana manodidina fiaran-dalamby mpandeha dia afaka mahafinaritra avy amin'ny entany varavarankely. Avy amin'ny fotoana no miala amin'ny gara any Venice, dia afaka misambotra topimaso lehibe Grand Canal, izay rehetra watercraft karazana sambo Azo jerena amin'ny alalan'ny. Venice no mandrafitra ny 118 nosy mifandray amin'ny tetezana ary nisaraka ny lakandrano. Io asa lehibe no malaza ho tanàna ny hatsaran-tarehiny, maritrano, Artworks ary rarivato eny an-dalambe. Dia lavitra tsy afaka manampy, fa raiki-pitia amin'ny faritra enchanted ity. Nitsidika Northern Italia lamasinina dia tsy tanteraka raha tsy misy fitsidihana Venice.
Florence, Renaissance ny tanàna malaza, no misy fotsiny adiny telo lamasinina avy any Venice. Rehefa tonga izany toerana itodiana, saika isaky ny toerana lehibe ao mandeha lavitra avy amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Toy ny renivohitry ny faritra Tuscany, Florence mirehareha mahagaga sakafo sy divay, miaraka amin'ny izao tontolo izao-kilasy tranombakoka. Tsidiho ny zava malaza, anisan'izany ny marevaka Ponte Vecchio fantatra ihany koa ho toy ny 'Old Bridge', Florence Duomo ny mijoalajoala sy ny sary sokitra Michelangelo Davida.
Cinque Terra – Nitsidika Northern Italia By Train
Ho Cinque Terra ny fijanonana farany – io faritra mahavariana ihany ora vitsy lamasinina avy any Florence. Cinque Terra tsy misy tranom-bakoka na malaza manan-tantara toerana fa dia manaitra fizarana ny Italiana Riviera izay efa sisa mbola tsy. Taorian'ny andro nitsidika Avaratra Italia lamasinina, izany no toerana tsara hankafy ny voajanahary Italia tontolo. Ny morontsiraka be havoana dia mifangaro ny vatolampy hantsam-bato sy tanim-boaloboka tsara tarehy dimy tsara tarehy sy lavitra fanjonoana tanàna.
Reggio Emilia ho Levanto Lamasinina
Genoa ho Levanto Lamasinina
Sestri Levante ho Levanto Lamasinina
Parma ny Levanto Lamasinina
Ny tanàna dia mifandray ihany baka, tongotra lavitra lalana ary mazava ho azy andalana fiaran-dalamby. Hitety ny harambato sy ny tora-pasika ary refuel amin'ny iray amin'ireo tsara tarehy trano fisotroana kafe mihantona ny amin'ny dongon be vato tazana ny seranan-tsambo. Ity faritra idyllic fofonaina-tena ilainy – ny tonga lafatra toerana indray energize. Avy eto dia afaka maka ny lamasinina hiverina any Milan izay afaka manomboka ny dianareo an-trano.
No hitsidika Northern Italia lamasinina? Ampahafantaro anay ny toerana tena toerana izay efa nitsidika ny nibitsika antsika amin'ny @SaveATrain! mavitrika koa isika rehetra ara-tsosialy fantsona, Zahao hoe Saveatrain
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, avy eo kitiho eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/touring-northern-italy-by-train/ – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)